FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Itali IsiBhulu IsiCambodia IsiDangme IsiEwe IsiFrentshi IsiGa IsiGreenland IsiKimbundu IsiKwangali IsiKwanyama IsiLaotia IsiLingala IsiMaltese IsiMixe IsiMyanmar IsiNahuatl (saseCentral) IsiNahuatl (saseNorthern Puebla) IsiNdebele IsiNdonga IsiNgabere IsiNgesi IsiNzema IsiPhuthukezi IsiQuechua (saseAncash) IsiQuechua (saseAyacucho) IsiQuechua (saseCuzco) IsiSuthu (Lesotho) IsiSwati IsiTahiti IsiTotonac IsiTsonga IsiTswana IsiTwi IsiUmbundu IsiVenda IsiXhosa IsiZulu
UMYENI ka-Anita wayeyicaphukela gqitha into yokuba eliNgqina likaYehova. * (Funda umbhalo osemazantsi.) Wazama ukumyekisa ukuya kwiintlanganiso waza wamxelela ukuba angaze aphinde alibize igama likaThixo. Ukuva nje igama elithi Yehova kwakumcaphukisa kakhulu.
Kwakhona, umyeni ka-Anita wayengafuni ukuba afundise abantwana babo ngoYehova okanye aye nabo kwiintlanganiso. Yayinzima kakhulu le nto kuAnita kuba kwakufuneka enze iinzame zokubafundisa ngoYehova kodwa umyeni wakhe angambhaqi.
Njengokuba sibona kula mava ka-Anita, mhlawumbi nakuthi kungakho ilungu lentsapho elinokuzama ukusiyekisa ukukhonza uYehova. Okanye unganenye ingxaki. Mhlawumbi sekulixesha elide ugula. Mhlawumbi uye wafelwa ngumntwana, umyeni okanye umfazi. Okanye ilungu lentsapho olithandayo liye lamshiya uYehova. Xa kuvela ezi ngxaki, yintoni onokuyenza ukuze uhlale uthembekile kuYehova?
Umpostile uPawulos wathi: “Kufuneka ninyamezele.” (Hebhere 10:36) Ngoko ke, yintoni enokukunceda unyamezele?
THANDAZA KUYEHOVA AKUNCEDE
Xa usentlungwini, khumbula ukuba ufanele uthembele kuYehova ukuze akuncede unyamezele. Thandaza kuye ucele uncedo. Yiloo nto kanye eyenziwa nguAna xa wafelwa ngumyeni wakhe ngequbuliso. Babeneminyaka eyi-30 betshatile. UAna uthi: “Akazange abuye emsebenzini. Wayeneminyaka eyi-52 qha ubudala.”
UAna wayexakekile emsebenzini, kodwa oko akuzange kumenze alibale ngentlungu akuyo. Yintoni awayenzayo? Uthi: “Ndayiphalazela kuYehova imbilini yam ndaza ndamcela ukuba andincede.” Uyazi ukuba uYehova wamnceda kuba uthi emva kokuba ethandazile wayesiba noxolo aze azole. Yaye uthi: “Ndiqinisekile ukuba uYehova uza kumvusa umyeni wam.”—Filipi 4:6, 7.
UYehova uthembisa abakhonzi bakhe ukuba uya kuyiva imithandazo yabo. (INdumiso 65:2) Yaye uya kubanika nantoni na abayidingayo ukuze baqhubeke bemkhonza. UYehova uya kukunceda uhlale uthembekile kuye nakwezona meko zinzima.
SONDELELANA NABAZALWANA NOODADE
Ikho nenye indlela uYehova asinceda ngayo sinyamezele. Usinike abazalwana noodade ebandleni. Sinokufunda okuthile kwindlela abancedana ngayo abazalwana baseTesalonika xa babetshutshiswa ngokukrakra. Ngelo xesha, kwakufuneka baqhubeke bekhuthazana nangakumbi. (1 Tesalonika 2:14; 5:11) Bancedana ukuze bahlale bethembekile kuYehova ngokuthi bahlanganisane nangokuba babe zizihlobo. Singenza ntoni thina ukuze sihlale sithembekile njengamaKristu aseTesalonika?
Sifanele senze izihlobo ebandleni size sikhuthazane, ingakumbi xa kuvela amaxesha anzima. (Roma 14:19) Umpostile uPawulos wayesentlungwini ngenxa yentshutshiso nezinye iingxaki, kodwa uYehova wamnika amandla okunyamezela. Ngokomzekelo, uYehova wamnika abazalwana noodade bokumkhuthaza. Lo mpostile wathi ngezihlobo zakhe: ‘Bandomeleza.’ (Kolose 4:10, 11) Aba bazalwana babemthanda uPawulos. Ngoko xa wa yedinga uncedo, bamthuthuzela baza bamkhuthaza. Mhlawumbi nawe usenokucinga ngexesha laxa abazalwana noodade ebandleni bathetha okanye benza into eyakukhuthazayo.
CELA ABADALA BAKUNCEDE
UYehova ukunike abadala ebandleni. La madoda anokukukhuthaza aze akunike icebiso elihle leBhayibhile. ‘Anjengendawo yokuzimela umoya nendawo yokuzifihla esiphangweni, anjengemisinga yamanzi kwilizwe elingumqwebedu, yaye anjengomthunzi wengxondorha enkulu kwilizwe elibharhileyo.’ (Isaya 32:2) Kuyasithuthuzela ukwazi ukuba aba bazalwana bakulungele ukusinceda. Ngoko xa kunzima, yiya kubadala. Banokukunceda uqhubeke ukhonza uYehova.
Kakade ke, abadala abanakukwazi ukusombulula zonke iingxaki onazo. Kaloku nabo abafezekanga njengawe. (IZenzo 14:15) Kodwa unokuziva ubhetele xa uye kumdala aze athandaze kuYehova ngengxaki onayo. (Yakobi 5:14, 15) Ngokomzekelo, abadala bakhuthaza omnye umzalwana eItali owayekhathazwa yimpilo kangangeminyaka. Lo mzalwana wathi: “Uthando lwabazalwana nokusoloko bendityelela kwandinceda ndanyamezela.” Ukuba nawe uneengxaki, uYehova ufuna ucele abadala bakuncede.
ZIXAKEKISE NGOKUKHONZA UYEHOVA
Xa sixakekile sikhonza uYehova, siya kubona indlela aza kusinceda ngayo. Wenza kanye loo nto uJohn. Xa wayeneminyaka eyi-39 wafumanisa ukuba unomhlaza ongaqhelekanga. Wayengayamkeli into yokuba egula kangaka ekubeni wayesemtsha ngeminyaka. Wayexhalabele umfazi wakhe nonyana wabo owayeneminyaka emithathu. Uthi, “Umfazi wam kwakufuneka ahoye unyana wethu, nam andonge aze aqiniseke ukuba ndiyaya kwagqirha.” Unyango awayelufumana uJohn lwalumenza adinwe kakhulu, akhathazwe nasisisu. Kwakungaphelelanga apho. UJohn weva ukuba uyise ugulel’ ukufa ibe udinga umntu wokumnyamekela.
Yintoni eyanceda uJohn nentsapho yakhe kuloo maxesha anzima? Nakuba uJohn wayedla ngokudinwa, wayeqiniseka ukuba intsapho yakhe ixakekile ekukhonzeni uYehova. Uthi: “Sasisiya kuzo zonke iintlanganiso nasentsimini veki nganye yaye silwenza rhoqo unqulo lwentsapho kwanaxa kunzima.” UJohn wabona indlela ekwakubaluleke ngayo ukomeleza ubuhlobo bakhe noYehova. Nakuba ekuqaleni wayothukile yaye enexhala, wakhawuleza wazola. Wayesazi ukuba uYehova wayemthanda yaye emnika amandla awayewadinga. UYehova unokukunceda ngendlela efanayo xa unexhala okanye usoyika. UJohn uthi: “UYehova unokukomeleza njengokuba nam endincedile.”
Xa usiva ubunzima, khumbula la mazwi kaPawulos: “Kufuneka ninyamezele.” Thembela kuYehova ngokuthandaza kuye. Sondelelana nabazalwana ebandleni, cela uncedo kubadala yaye qhubeka uxakekile ekukhonzeni uYehova. Angakunceda nakweyiphi na ingxaki onayo ngoku neza kuvela.
IMBONISELO—EFUNDWAYO Juni 2015